Iwu Ramakrishna - WRSP
Order Ramakrishna nke Vedanta Society
Ntọala: Swami Vivekananda na ndị ọzọ na-eso ụzọ Sri Ramakrishna
Ụbọchị ọmụmụ: 1863
Ebe amụrụ: Calcutta, India
Afọ a tọrọ ntọala: 1897 (ụfọdụ akwụkwọ kwuru 1899)
Ederede Dị Nsọ ma ọ bụ nke A Na-asọpụrụ: Vedanta Society nwere ọtụtụ ederede ederede gbara gburugburu na nkwenkwe ha. Abụọ n'ime akwụkwọ ndị a bụ Bhagavad Gita 5 na Upanishads. Ederede abụọ a bụ etiti nke nkwenye Hindu na ntọala maka usoro nkwenkwe Vedanta Society. N'ihi ya, a pụrụ iwere ha dị ka ndị kachasị nsọ. Vedanta Society na-agbaso nkwenkwe nke okpukpe Hindu mana gafere ya iji gbakwunye okpukperechi niile. Vedanta Society na-agba mbọ itinye okpukpe niile wee na-ejikwa Akwụkwọ Nsọ. Esi mara Chineke: Yoga Aphorisms nke Patanjali bụ akwụkwọ ọzọ dị mkpa. Nke a na-akọwa yoga n'ụzọ miri emi. Shankara si Crest ọla nke ịkpa oke bụ kpochapụwo na ihe ọmụma dị ka ụzọ Chineke. N’ikpeazu, Imaputa Onwe ya bu nkowa nke Shankara banyere udiri nke onwe.
Ugo nke Otu: E nwere Vedanta Societies iri na atọ na United States, yana ogige 125 nke Iwu Ramakrishna na-achịkwa. Enwere ọtụtụ ebe 1,000 ọzọ na-ekwu aha Ramakrishna ma ọ bụ Vivekananda. 6
Enwere ike ịghọta nghọta nke akụkọ ihe mere eme nke Vedanta naanị site na ịghọta nghọta nke ndụ Sri Ramakrishna naanị. Sri Ramakrishna ekwughi na ya achọta ụzọ ọhụrụ maka nzọpụta ma ọ bụ chọta òtù nzuzo mana, kama nke ahụ, o kere ụdị agbaze okpukpe niile. Narị afọ nke iri na itoolu bụ mgbe okpukpe ụwa na-aga n'ihu na-ama jijiji site na ike ụwa dị ka ịhụ ihe onwunwe n'anya na obi abụọ. Ramakrishna ahụghị òtù okpukpe, mana nkwenkwe ya na mkpughe ya ghọrọ ntọala maka mmegharị nke ndị ọzọ ga-eke.
A mụrụ Ramakrishna na Bengal, India na February 17, 1836. A mụrụ ya ma zụlite na ezinụlọ dara ogbenye nwere ụkpụrụ Hindu siri ike. Ọ bụ ezie na ọ bụ nwa nkịtị, na-eme ihe ike maka ọtụtụ akụkụ, o gosipụtara n'oge ọ bụ nwata na ọ nwere nghọta dị ukwuu maka mpaghara ime mmụọ nke Hindu. Otu n’ime nkpughe mbụ ya bụ na mkpụrụ obi bụ isi ihe maka mmụta niile mana amaghị ihe na-egbochi ya.
Mgbe ọ dị afọ itoolu, nna ya nwụrụ, Ramakrishna tụfuru nna ya, nke a kpalikwara usoro ntụgharị uche karị ma dọrọ ya ezigbo nne ya nso. Ihe omume gbanwere ndụ kachasị bụ mgbe ọ bụ ụkọchukwu n'ụlọ nsọ nke na-efe Kali ofufe, Nne Chukwu ma ọ bụ ngosipụta nwanyị nke Chineke, dịka chi ha. (N’okpukpe Hindu ndị na-eso ụzọ Hindu nwere nhọrọ n'etiti ụdị chi ha chọrọ ife ofufe.) N'oge a Ramakrishna bidoro lewe Chukwu anya dịka "Nne Ebighị Ebi". 1 Ọ hụrụ nne ebighi-ebi dịka ọ chọrọ ịnye onye ọ bụla Amamihe nke Chineke ya ka ọ gbanye azụ ebe anyị hụrụ ihe onwunwe n’anya.
N'oge a Ramakrishna chọsiri ike ịhụ ọhụụ nke Chineke. Ọ nọrọ ọtụtụ ehihie na abalị ịhapụ ụwa a ma rịọ Nna nke Chukwu ka o mee onwe ya ka ọ hụ ya. Mgbe o mechara mee, ọ tụrụ Ramakrishna n'anya, nne Chukwu bịara dị ka ọnụnọ anyị niile. Nke a gosipụtara Ramakrishna na otu njikọ okpukpe adịghị mkpa, na okpukperechi niile nwere ebumnuche yiri nke ahụ ụzọ dị iche iche isi ruo ebe ahụ. N'iji usoro Hindu na emume o toro, o mere ya ihe mgbaru ọsọ ya na ndụ ịgbalịsi ike ịhụ ọhụụ nke Chineke. Ọ hapụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile iji nweta nke a - nri, mmiri, ụra, wdg.
Ezinụlọ na ndị enyi nke Ramakrishna aghọtaghị ihe ọ na-agabiga ma kwubie na ọ na-ara. Ha chọrọ ịhazi alụmdi na nwunye. Ramakrishna kwenyere ma lee nwanyị a anya (ebe ọ na-ele ụmụ nwanyị niile anya) dị ka ngosipụta nke nne Chineke. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ka ọ bụrụ onye na-eso ụzọ ya ka ọ ga na-abụ ihe Chineke ji arụ ọrụ.
Ihe kpatara Ramakrishna n'onwe ya abụghị onye guzobere Vedanta Society, mana nkwenkwe ya bụ isi nke Society, bụ n'ihi nkwenye siri ike ọ chọghị ndị na-eso ụzọ. O kwenyere na "a theụ na-abịa n'onwe ha ịchọ mmanụ a honeyụ mgbe okooko osisi ahụ na-ama ifuru." 2 Otu n’ime ndị kachasị bụrụ ndị na-eso ụzọ Ramakrishna bụ Swami Vivekananda. O mechara bụrụ onye ndu otu nke raara ndụ ha nye ịghọta Eziokwu na ijere ụmụ mmadụ ozi. Vivekananda wetara okpukpe Vedanta na US na nzuko omeiwu nke okpukperechi ụwa na Chicago na 1893. N'ihi na ọ bụ ewu ewu na n'ihi ọmarịcha okpukpe Vedanta Society, Vedanta bidoro itolite na America. “Na 1899, ya na nwanne na-eso ụzọ guzobere, Ramakrishna Order na Mission of India nwere ebe dị na USA na mba ndị ọzọ.” 3 Ihe ụfọdụ kpatara ịchọrọ ịchọta thekpụrụ ahụ bụ otu ihe ndị ahụ nọgidere na-eme ka Sri Ramakrishna chọkwuo ihe ọmụma banyere Chineke. Ebumnuche nke Vedanta Society na nke Ramakrishna Order ka achikọtara nke ọma na nkwupụta Swami Vivekananda na Ozi Ramakrishna 4:
Onye Kraịst ekwesịghị ịghọ onye Hindu ma ọ bụ onye Buddha, ma ọ bụ onye Hindu ma ọ bụ Buddhist ịghọ Onye Kraịst. Mana onye obula aghaghi idozi mmuo nke ndi ozo ma chekwaa onwe ya ma too dika iwu nke uto ya si di. Enwere m olileanya na n'isi nso nke okpukpe ọ bụla ga-ede n'oge na-adịghị anya, n'agbanyeghị nguzogide, 'enyemaka' ọ bụghị 'ọgụ,' 'assimilation' ọ bụghị 'mbibi,' 'nkwekọrịta na udo' na ọ bụghị 'esemokwu.'
A na-asọpụrụ Sri Ramakrishna dị ka otu n'ime ndị nkuzi kachasị ukwuu na akụkọ ntolite India. Dị ka Encyclopedia Brittanica na ebe nrụọrụ weebụ Vedanta si kwuo, The Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna “bụ ma eleghị anya ihe atụ a kacha mara amara n'akụkọ ihe mere eme nke nwoke nke gosipụtara ihe nlereanya dị mkpa nke nkwekọ nke okwukwe niile.” Ebe a na-ekwukwa na "nke ya bụ ozi ebighi ebi nke ịdị n'otu nke ịdị adị na Chi nke Mkpụrụ Obi." Ezigbo ndị na-eso ụzọ Sri Ramakrishna mere ka ọtụtụ nkwenkwe ya na mkpughe ya pụta ìhè site na itinye West. Nkwenkwe ndị a bụ isi n'ịdị mkpa nke akara, mantra, ntụgharị uche, na nne. Ihe ndị a niile dị mkpa n’ihi na e kwuru na uto ime mmụọ na-esite n’ime karịa site n’Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ n’ederede. Sri Ramakrishna kwenyere na ịdị adị nke ịdị adị ma nwee echiche iri abụọ nke otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya dere bụ ntọala nke Vedanta Society.
A ga-ekewa akụkụ ndị dị mkpa nke Vedanta ụzọ ise: (1) akara, (2) mantra, (3) yoga, (4) ntụgharị uche, na (5) nne.
Nke mbụ n'ime ndị a, akara ngosi 8., dị oke mkpa maka nghọta nke Vedanta Society. Ihe nnọchianya kachasị mkpa nye Vedanta Society bụ ụda nke "Om." Upanishads, Hindusom ho nhoma bi ka sɛ, “Om” yɛ asɛmfua a egyina hɔ ma biribi. Om bụ ihe nnọchianya maka Real Real ma ọ bụ Brahman nke nwere ike ịbụ, ma sụgharịa ya "Chineke."
Gịnị mere akara ngosi a ji dị oke mkpa? E nwere ihe abụọ. Nke mbu okwu dika ndi Hindu si kwuo ya nwere nkeji ato ma obu olu: A, U, M ma obu Aum. Na mkpụrụedemede Sanskrit ụda atọ a nwere ụda niile mmadụ nwere ike ịme. Ya mere, Om na-anọchite Brahman ma ọ bụ Chineke dị nsọ na ebe niile. Ọ bụ ụdị nke Brahman ma ọ bụ Chineke. Nke abụọ, "Om" bụ akara maka Brahman n'ihi na ọ nwere njikọ n'ụdị ya mgbe a na-akpọ ụda olu. N’uzo doro anya, a kwenyere na ụda ụda okwu niile enweghị ụda. Na Om a "enweghị ụda" a na-ekwuchitere Brahman. Ya mere, Om bu akara kacha nso / nnochite anya / nkowa nke Brahman onye puru inweta. N'ihi na nke a bụ okwu kachasị nsọ ọ na-abụkarị nnọchi maka mantra maka ntụgharị uche.
Akụkụ nke abụọ nke Vedanta Society bụ ojiji nke mantra. Enwere ike ịkọwa nke a dị ka ikwughachi aha ma ọ bụ akara aha Chineke ugboro ugboro n'olileanya nke iwetara onwe gị n'ọtụtụ ọkwa nke mmụọ. Isi okwu nke mantra bụ ịhapụ echiche nke ihe niile belụsọ maka echiche Chukwu nke Chukwu. Otu ụkpụrụ maka nke a bụ na mmadụ ga-ebi ndụ na-enweghị mgbakwunye na ụwa a. Aha e nyere mantra nke ịkpọghachi aha Chineke bụ Japa. Site na usoro a ọ ga - ekwe omume ịbịaru nghọta Chineke site na ịkọ aha ya na itinye uche na ya.
Yoga, akụkụ nke atọ nke Vedanta, nwere ihe mgbaru ọsọ ya ịbụ otu na Brahman ma ọ bụ Chineke. A ga-asị na onye ga-emeli nke ọma emezuwo ihe ọmụma, o nwekwara ike ịkpọ ya ụdị Buddha ma ọ bụ Brahmajnani Enwere ụzọ ndụ yogic anọ niile na - eduga mmadụ na otu ebumnuche nke nghọta. Ndị a bụ Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, na Raja yoga. 12 Ebumnuche nke ụzọ anọ a dị iche iche bụ iji tụlee na ndị dị iche iche na-ahọrọ ịzọ ụzọ dị iche iche.
Nke mbụ n'ime ụzọ ndị a, Jnana yoga bụ yoga nke ihe ọmụma. Ezubere ya maka ndị nwere ọgụgụ isi ọgụgụ isi karịa, yabụ ụzọ iji nweta nghọta ga-achọ ịda mba azịza n'ụzọ ezi uche dị na ya nke ga-emecha zaa ihe ọmụma bụ n'ezie. N'ikpeazụ, onye na-atụgharị uche nwere ike ịhụ onwe ha dị ka otu na Chineke.
Uzo nke abuo a bu Bhakti yoga bu “uzo nke ihunanya.” 13 E kwenyere n'etiti Society na mmetụta mmetụta ịhụnanya bụ nke siri ike karịa. Ya mere, Bhakti na-enweta obi a ma gosiputa Chineke nke nwere njirimara dika onye okike. Ekwere na onye ahụ nwere ike ịhụ Chukwu n’anya n’ụzọ ise dị iche iche. Shanta bụ ụzọ mbụ ma pụtara echiche dị jụụ. Dasa bụ nke abụọ a sụgharịrị dị ka "àgwà nke ije ozi" dịka nke dị n'etiti ohu na nna ya ukwu. Sakha bụ "àgwà ọbụbụenyi." Vatsalya bụ omume nke nne na nna ebe ndị na-efe ofufe na-ele Chineke anya dịka nwa ya. Madhur bu nke ise ma putara omume ndi huru n'anya. Nke a bụ mgbe ndị ji ofufe kpọrọ ihe lere Chineke anya dị ka onye hụrụ ya n'anya. Lovehụnanya nile aghaghi ịbụ nke na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị, na-agaghị atụ egwu, ma ọ bụ na-emegide ndọrọ ndọrọ
Karma yoga bụ ụdị yoga nke atọ. A sụgharịrị nke a n'ụzọ nkịtị dị ka "ụzọ ọrụ." Ebumnuche dị oke mkpa karma yoga. Ebumnobi bụ ihe a na-apụghị izere ezere; o gaghi adi ka ochicho nke ihe o bula.
Zọ nke anọ bụ Raja yoga, ma ọ bụ “ụzọ ndị eze.” Ihe kpatara aha a bụ n'ihi akụkọ ihe mere eme nke usoro eze nke ụdị yoga. A kwenyere na nke a bụ usoro mmụta sayensị ga-esi nweta mmata nke ga-ajụ ndị na-efe ya ajụjụ ga-enyere ya aka ikpebi ma ọdịdị ya ọ bụ nke Chukwu, n’ezie. Site n'ụdị ntụgharị uche a, mmadụ na-elekwasị anya n'ike n'otu isi okwu, ma ọ bụ ihe, iji tufuo onwe ya na mgbakwunye.
A na-eme yoga ụdị anọ a ka iche ụdị mmadụ dị iche iche. Otú ọ dị, mmadụ ga-eme otu n’ime ha. Enwere ike mmadụ ime ihe anọ ahụ (n'oge dị iche iche) iji wee jupụta ụdị dị iche iche n'ime mmadụ niile. Ofzọ ndị a niile, ọ bụrụ na emezuru ya nke ọma, na-eduga na nghọta. E gosipụtara echiche a na Akara nke Usoro Ramakrishna. 17 Akara na-ekpokọta ụzọ anọ jikọtara dị ka isi nke Chineke. Anyanwu na-awa na-anọchi anya Jnana yoga, lotus na-anọchite anya Bhakti yoga, ụzọ mmiri si eguzo maka Karma yoga, agwọ gbara ya gburugburu na-anọchi anya Raja yoga.
Echiche nke atọ dị oke mkpa maka nghọta nke Vedanta bụ echiche nke nne zuru ụwa ọnụ. Nke a amachaghị ọtụtụ ndị Western. Nye ndị Hindu, a na-ewere Chineke dị ka otu onye, ​​nke nwere ike ịbụ ma nwoke, nwanyị, ma ọ bụ enweghị ọhụụ. "Nne nke Chi." 18 bụ ngosipụta nke ịhụnanya na-enweghị nsọtụ na Eluigwe nke Ọma. (The Symbol, Mantra, Yoga, Meditation, Mother, p.1) motherdị nne a na-anọchite anya ịdị nso, enweghị atụ, mgbaghara, na ịhụnanya kachasị n'etiti nne na nwa. Ihe ọzọ dị iche na nghọta ọdịda anyanwụ nke Chineke bụ na ndị Hindu abụghị naanị na-ele Chineke anya dị ka onye okike nke ihe niile, kamakwa ha na-ele Chineke anya dị ka ezigbo ihe Ọ / She / Ọ kere. A na-ele Atọ n'Ime Otu, mkpụrụ obi mmadụ, na okike anya dị ka ndị chi nne na nna jikọrọ ọnụ. A na-ele ya anya dị ka mama nke jikọtara ụwa a.
Echiche nke anọ, ntụgharị uche, gụnyere ọtụtụ nkwenye na omume ndị ọzọ nke Vedanta. Iji ghọta ntụgharị uche, mmadụ ga-enwerịrị ihe ọmụma banyere uche n'onwe ya. Upanishads na-akụzi na e nwere akụkụ atọ nke uche: mmuo, ihe kpatara ya, na nghọta.
Ọ bụ naanị site na nsinammuo ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ịmalite ịghọta mpaghara nke ọzọ. Iji ghọta ihe dị nsọ nke mmadụ ga-agarịrị karịa mpaghara ọgụgụ isi. Iji ghọta Chineke, mmadụ gafere akwụkwọ niile na akụkụ Akwụkwọ Nsọ niile ma dabere naanị n'ogo nke onwe.
Ọ bụrụ na ụmụ mmadụ apụghị ịghọta Chineke site na ọgụgụ isi kwa ụbọchị, kedụ ụzọ mmadụ ga-esi mara Chukwu? Ndị Veda na-akụzi ụzọ a ịbụ yoga. Tụgharị uche bụ akụkụ buru ibu nke yoga. A pụrụ ịkọwa Yoga dị ka ụzọ nke “njikọ nke mkpụrụ obi mmadụ na Mkpụrụ Obi Kasị Elu ma ọ bụ Oversoul.” 19
Iji kwadebe onwe gị nke ọma maka yoga, mmadụ aghaghị itinye ntụgharị uche nke na-eme ka obi na uche dị ọcha. “Itationtụgharị uche bụ ime ka mmadụ nwee otu echiche banyere ebumnuche ime mmụọ mmadụ na-enweghị nkwụsịtụ, dị ka mmanụ a na-awụpụ n’otu arịa wee na-aga n’ihu.” 20 itationtụgharị uche na-eme ka uche dị jụụ ka anyị nwee ike ịgafe n’elu ala ma gwuo ala n’ime mmata anyị ebe Chineke tọrọ atọ. Mgbe obi dị jụụ, mmadụ nwere ike itinye uche na samadhi, ma ọ bụ usoro ịjụ oyi n'oge.
Swami Vivekananda, otu n’ime ndị na-eso ụzọ kacha ukwuu Sri Ramakrishna, kwuru ụzọ mmadụ ga-esi gbalịa ime ka ihe mgbaru ọsọ ya ọsọ site na ntụgharị uche:
Firstzọ mbụ bụ ka anyị ghara ịhapụ ịdọ aka ná ntị na-adịghị agbanwe agbanwe, nwee afọ ojuju ka ị ghara inwe obi dị ọcha, lekwasịkwa anya mgbe niile n'ịsọpụrụ Chineke.
Secondzọ nke abụọ bụ site n’ịnọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ asana. Ọnọdụ mmadụ kwesịrị ịkwụsi ike ma ọ dịkwa mma. Otu mgbochi bụ na ahụ dị elu ga-akwụ ọtọ ma kwụ ọtọ. Ọnọdụ gụnyere iku ume kwesịrị ekwesị, n'ime ma pụọ ​​nwayọ site na imi. Uche mmadu gha aduputa na mbu, ya kwe. Mgbe minit ole na ole na-awagharị, mmadụ aghaghị ịmalite itinye uche ya.
Itinye uche, ma ọ bụ dharana, n'otu isi ihe ma ọ bụ ihe bụ ụzọ nke atọ iji nweta nghọta. Onye nwere ike họrọ itinye uche ya na mantra ma ọ bụ na ụda, Om, ma ọ bụ na ahịrịokwu nke na-eweta nkasi obi. Itinye uche na-eduga mmadụ n'ime ntụgharị uche n'ezie, dhyana, wee banye na samadhi, bụrụ otu na Brahman.
Mkpebi bụ nzọụkwụ ọzọ dị mkpa maka mmụta. Preferredtụgharị uche ugboro abụọ n’ụbọchị, otu mgbe chi bọrọ na otu anyasị, ka a họọrọ; Otú ọ dị ehihie na alakpu ụra bụ na na na oge ka mma na-atụgharị uche.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ka ịnwe mpaghara dị iche, karịa ihe ọ bụla ọzọ dị ka o kwere mee, iji tụgharịa uche. Iji maa atụ, ime ụlọ dị iche nke ebe anaghị ehi ụra, anaghị anabata iwe, na ebe mmadụ ga-adị ọcha bụ ọtụtụ ndị Swamis, ndị isi nke Vedanta Orders tụrụ aro. 21 N’eziokwu ndị Swam a na-ekwu na ntụgharị uche ga-eme na mmekorita ya na ibi n’ụwa a, mana mmadụ agaghị ekwe ka ihe ụwa bụrụ akụkụ nke onwe ya. Alizingghọta Chineke, ma ọ bụ Enlightenment, si otú a ga-enweta na ndụ a. Ọ bụ olile anya nke ndị Swamis na ịhụnanya a ga-efe efe n'etiti ọha mmadụ niile.
Akpụrụ nke anọ na isi maka Vedanta Society bụ ịdị n'otu, ma ọ bụ nkwanye ùgwù maka okpukpe niile. Dị ka ekwuru na abụbụ Sanskrit:
Dị ka iyi dị iche iche
Inwe isi mmalite ha
N'ebe di iche iche
Ha niile na-agwakọta mmiri ha n'oké osimiri,
Ya mere, O nwe-ayi, ụzọ dị iche iche nke ụmụ mmadụ na-esi
Site na iche iche,
Dị iche iche n'agbanyeghị na ha pụtara
Gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ kwụ ọtọ
All na-eduga gị. 22
Nkwanye ùgwù a maka okpukpe niile bụ ihe Sri Ramakrishna ji kpọrọ ihe nke ukwuu. N'ezie, Ramakrishna na-etolite na-ekpe okpukpe niile bụ isi na ihe ọ bụla gbasara Hindu. Na 1866 ọ gbasoro ụzọ ndị Alakụba ma nwee ọhụụ nke Muhammad. Ka oge na-aga, ọ mụrụ banyere Iso Christianityzọ Kraịst dị ka chiri anya ma hụ ọhụụ nke Jizọs. Mgbe ọ gafere okpukpe niile a ọ chọpụtara na ọ ruru otu ebumnuche mgbe niile. Ma okpukpe kwuru na ihe mgbaru ọsọ a bụ nirvana ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ Alaeze Chineke, ihe mgbaru ọsọ bụ otu.
Swami Vivekananda na-ekwuputa otu ochicho a na ntinye aka na The Ramakrishna Mission. Ọ na-ekwu, sị: “Okpukpe nke ịrọ òtù, ịkpọasị, na ajọ nwa nke ya, ịnụbigara okpukpe ọkụ n'obi ókè, enwetawo ụwa a mara mma eri oge. Ha ejiriwo ime ihe ike mejupụta ụwa, jiri ọbara mmadụ na-a itụ ya ugboro ugboro, mebie mmepeanya ma mee ka mba niile daa mbà. A sị na ọ bụghị ndị mmụọ ọjọọ a jọgburu onwe ya, ọha mmadụ gaara enwe ọganihu karịa ka ọ dị ugbu a. Ma oge ha abịawo. Enwere m olileanya na mgbịrịgba nke tolitere n'ụtụtụ a… nwere ike ịbụ ọnwụ nke oke ịnụ ọkụ n'obi niile, mkpagbu niile ejiri mma agha ma ọ bụ pen, yana mmetụta enweghị obi ebere n'etiti ndị na-aga otu ihe mgbaru ọsọ. " 23 Otu a mmadu puru isi na nhota a na anaghi ahu ndi di iche nye okpukpe ndi ozo dika ihe na-ezighi ezi kamakwa na ha bu ndi na-ebibi ihe.
Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ozi Chukwu. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.
Abhedananda, Swami. 1983. The Vedanta Nkà Ihe Ọmụma. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.
Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center nke New York. New York.
Biakwa obia Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ntọala Vivekananda. Oge gara aga gara 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/
Gupta, Mahendranath. Oziọma Sri Ramakrishna. Ogige Ramakrishna-Vivekananda. Ikpeazụ gara 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/
Hixon, Lex William. Nnukwu Swan: Nzukọ na Ramakrishna. Akwụkwọ Larson. Ikpeazụ gara 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html
Onyekwere, Christopher. Ramakrishna na Ndị Na-eso Hiszọ Ya. Vedanta Pịa. Ikpeazụ gara 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm
Jackson, Carl T. 1994. Vedanta maka West: The Ramakrishna Movement na United States. Bloomington: Mahadum Indiana University.
Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Nkà Ihe Ọmụma nke Vedanta, Echiche nke Oge A. New Delhi: DK Printworld.
Sai Sai Baba Picture Museum. Ọnwa Iri na Abụọ 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm
Atụmatụ na Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. 1991. New Delhi: Ndị Bipụtara Sterling.
Prasad, Narayana. 1994. Karma na Reincarnation: Echiche nke Vedanta. New Delhi: DK Printworld.
Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, Nnukwu Nna-ukwu (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center nke New York. Ikpeazụ gara 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm
Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Atụmatụ na Ramakrishna - Omenala Vivekananda Vedanta. New Delhi: Ndị Bipụtara Sterling.
Vedanta Society nke Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society nke Southern California. Ikpeazụ gara 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm
Vedanta Society nke Toronto. Toronto, Ohio. Ikpeazụ gara 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm
Ebighebi Ebighi-ebi. Enweghi aha. Ikechukwu, GA Ikpeazụ gara 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html
Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, Nnukwu Nna-ukwu." 20 Jenụwarị 1997: 47.
Sri Ramakrishna nke Swami Vivekananda, p.3. Ihe edemede na peeji nke Ramakrishna-Vivekananda Center nke New York. (:Bọchị: 12/14/98)
Sri Ramakrishna nke Swami Vivekananda, p.7. Ihe edemede na peeji nke Ramakrishna-Vivekananda Center nke New York. (:Bọchị: 12/14/98)
Ihe nlere nke Vedanta nke oge a site na ọchịchọ ebighi ebi, p.3. Edemede dị na peeji nke akwụkwọ Ebighị Ebi: Vedanta na Atlanta.
Ozi Ramakrishna nke Vedanta Society nke Toronto. Ederede dị na peeji nke Vedanta Society nke Toronto: Ramakrishna Mission. (:Bọchị: 7/22/98)
Bhagavad Gita nke Simon kwuru. Edemede na peeji nke Prasanthi Nilayam, Abode nke Onyenwe anyị Sai Baba. (Datebọchị: 11/6/98)
Kedu ihe bụ Vedanta nke Vedanta Society nke Southern California. Edemede na ibe nke ibe Vedanta.
Ihe nnọchianya nke Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Yoga nke Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Akwụkwọ nke Vedanta Society nke Southern California. Edemede n'ụlọ peeji nke
“Pzọ nke ịhụnanya.” by Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Hụ Chineke n'anya n'ụzọ ise dị iche iche. by Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
“Ofzọ ime ihe.” by Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
”Thezọ eze.” by Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Akara nke Ramakrishna Order edemede na ibe akwụkwọ nke Vedanta Society of Southern California (Datebọchị: 12/3/98)
“Nne Chukwu nke Umesh C. Gulati, Ph.D. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Ihe omuma, Mantra, Yoga, Ntughari uche, na Nne site na Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Ihe omuma, Mantra, Yoga, Ntughari uche, na Nne site na Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Ihe edemede na peeji nke Umesh C. Gulati, Ph.D.
Peeji Vedanta p.1 edemede na ibe nke Vedanta Page (Datebọchị: 12/24/97)
Ozi Ramakrishna nke Vedanta Society nke Toronto, p. 2. Edemede na peeji nke Vedanta Society nke Toronto: Ra
Ozi Ramakrishna nke Vedanta Society nke Toronto, p. 2. Edemede na peeji nke Vedanta Society of Toronto: Mission Ramakrishna (:Bọchị: 7/22/98)
Onye Okike Anne Oelrich kere
Soc 257: Ọhụụ Ọhụrụ
Oge Nkwụsị, 1998
Mahadum nke Virginia
Imelitere ikpeazụ: 07 / 23 / 01